Ewan McGregor, Mary Elizabeth Winstead akapatsanurwa mushure mekunge asiya mukadzi pakati pekunyepera - Nhau
Kuru Macelebs Style Nhau Varaidzo
Ewan McGregor naMary Elizabeth Winstead vakarambana here mushure mekupedza muchato wavo pakati pekunyengera?
Kashoma mwedzi mushure mekunge Ewan McGregor akumbira kurambana nemukadzi wake wemakore makumi maviri nemaviri, Eve Mavrakis, zvichitevera kubiridzira, gwaro idzva rinoti iye nemusikana Mary Elizabeth Winstead vaparadzana.
Kwayedza inonzi iri padyo naEwan, 46, uye nyeredzi ye'Fargo 'Mary - avo vakatanga kutorwa mifananidzo vachitsvoda muna Gumiguru - vakaudza chinyorwa cheStar magazine kuti Mary, 33, apedza kudanana nemutambi weScotland nekuti kunyadziswa kwakabatana nehukama hwavo kwaive kwakanyanya kutsungirira.
sarah silverman michael sheen akavimbiswa
'Mary aivenga kunzi anoputsa imba uye kunyara kwaakamukonzera. Zvinosuruvarisa nekuti gore rakapfuura Ewan nemukadzi wake vaive mune chimiro uye akabva afunga kurasa zvese kunaMary. Iye zvino zvinoita sekunge akarasikirwa navo vese zvakanaka, 'sosi akaudza iyo tabloid (sezvakataurwa na Iyo Tsamba neSvondo (Kukadzi 24.
Apo The Mail musi weSvondo yakasvika kuna Eve, 51, musi waFebruary 23 kuti abvunze kana aiziva nezve kupatsanurwa kwaEwan naMary, akati, 'Kwete, ndakanga ndisina kunzwa,' uye akaramba kutaura zvimwe.
Mushure memifananidzo yaEwan naMary vachigadzira kuresitorendi yeLondon zvakaburitswa pakupera kwekupedzisira, People magazine yakataura kuti anga akanyarara akaparadzaniswa naEvha , amai vevana vake vana, muna Chivabvu apfuura. Ndiwo mwedzi mumwechete Mary akazivisa pa Instagram kuti iye nemurume Riley Stearns vaive varambana.
Zvinoenderana nemushumo waNovember 2017 mu Zuva , mutambi akabvuma kuna Evha, mugadziri wechiGreek-wechiFrench, muna Chivabvu uyo anga achidanana nemumwe wake-nyeredzi 'asi akaramba achiti hapana chakaitika,' rakadaro pepanhau.
Anobva akatsanangura mumushumo mumwe chete kuti 'Eve ane chokwadi kuti Ewan naMaria vaive pamwe asati abvuma manzwiro ake pamusoro pake. Zvakaoma kuti amutende. Aya mamiriro akanyanya kuomera iye nevana vavo vana. '
Pakutanga kwaNovember, Zuva akataura kuti Eve akataura nezvekupatsanurwa kwake kunokatyamadza naEwan, kekutanga, kuburikidza neye Instagram kutaura.
alan thicke mukadzi tanya callau
Mushure mekunge muteveri anyora, 'Handikwanise kutenda kuti Ewan yaizopedzisa zvinhu newe nezve izvo zvakachipa w---! U uri nani kwazvo kupfuura iye !!!! Mutorei pendi yese yamunogona !!!! ' Evha akapindura, 'Chii chandingaite?'
da brat ndiye ngochani
MunaNdira, Ewan akaita misoro paaka zvisingaite akatenda vese Eve naMaria mukutaura kwake mushure mekunge ahwina Goridhe Globe yebasa rake mu 'Fargo.' 'Ndiri kuda kumbotora kanguva ndichingoti ndatenda kunaEv aigara akamira neni kwemakore makumi maviri nemaviri, uye vana vangu vana, Clara, Esther, Jamyan naAnouk - ndinokudai,' akadaro asati aenderera mberi nekurumbidza shamwari yake- nyeredzi - kusanganisira Maria, aive wekupedzisira waakataura.
Paul Drinkwater / NBCUniversal kuburikidza neGetty Mifananidzo
Daily Mail payakasvika kunaEve kuti ibvunze kana aifarira zvainge zvataurwa naEwan, akangoti, 'Kwete, Handina kufarira kutaura kwake . '
Mazuva akazotevera munaNdira 19, Ewan akamhan'arira kurambana, achidudza kusawirirana kusingawirirane. Mapepa edare anoratidza kuti akanyora May 28, 2017, sezuva ravo rekuparadzaniswa, akakumbira kuchengetedzwa pamwe nemutemo kwevanasikana vavo vatatu uye vaida kubhadhara murume nemukadzi. Gweta raEve akamhan'arira mhinduro yake panguva imwe chete, akadaro TMZ, achiratidza kuti Eve anoda kuchengetwa chete nekushanyirwa kwaEwan.
'Zvinosuwisa uye zvinogumbura,' Eve akaudza Zuva neSvondo mushure mekunyora, 'asi chandinonyanya kunetseka ndechekuti vana vedu vana vakanaka.'
Miley Cyrus naKaitlynn Carter vanoonekwa vachigadzira zvakare: Rondedzera
Rocker Alice Cooper anoratidzira chibvumirano cherufu nemukadzi wemakore makumi mana nematatu
Katy Perry naOrlando Bloom vachironga muchato wechiJapan: Chirevo
Muchato wepachivande wakaratidzwa: waKylie Jenner aimbova Tyga akamboroorwa naTristan Thompson aimbova Jordan Craig
Jack Osbourne nemukadzi wake vari kurambana mushure memakore angangoita matanhatu: Rondedzera
Miley Cyrus akamira akapfeka bikini mushure mekuita mukurumbira weVMA
'Rehab Addict' nyeredzi Nicole Curtis mumutambo mutsva wekuchengeta: Ex anoti haana kukodzera kuva mubereki
wendy williams anoita sei chaizvo
ndiani taraji p henson akaroora
caitlin jenner dzokera bruce
julie bowen uye sofia vergara
wendy murume kana mukadzi
ndiani bo derek akaroora